8 khudaar oo had iyo jeer diyaar u ah jikadaheena | Cusbooneysiinta Cagaaran
8 khudaar oo midba midka kale ka dib dib u soo kori kara
Manuel Ramirez | | Beeraha deegaanka, Ecology
Horaan kaaga faalloonay dhibaatada wasakhda carrada iyo sida meelaha qaar ay xaalufin u geystaan ​​iyadoon la ogeyn sababo kala duwan awgood, awood u yeelan karno inaan bedelno qorshayaasha taas oo ku habboonayd koritaanka qaarkood in ay awalba macquul ahayn in wax lagu beero.
Maanta waxaan kuu keenaynaa 8 khudaar ah in ay dib ugu kori karaan inta jeer ee ay rabaan sida chives, toon, kaabajka Shiinaha, karootada, basil, celery, salad romaine ama endive, iyo koryander. Sideed fursadood oo awood u leh inaan marwalba haysano noocan ah maaddooyinka laga heli karo jikadayada taasna waxay noo oggolaanaysaa inaanan inta badan ku tiirsaneyn carrada aan ku beeri doono. Weel ubax ama weel biyo ah ayaan ku haysan karnaa markasta oo aan doonno annaga oo aan wax lacag ah ku bixin si aan uga iibsanno supermarket-ka.
3 Kaabashka Shiinaha
7 Salaati ama roodhida Romaine
Chives ayaa dib u kori kara ka tagida jirida goostay ilaa 1 ama 2 sentimitir xididka si aad ugu rido dhalo yar oo biyo ah oo dusha ka daboola sida aad sawirka ku aragtaan.
Marka toontu bilaabaan inay soo baxaan talooyinka cagaaran, way noqon karaan ku rid weel galaas biyo yar leh. Geedku waxay leeyihiin dhadhan ka fudud kan toonta waxaana lagu dari karaa saladhyada, suxuunta iyo noocyada kale ee cuntooyinka.
Kaabashka Shiinaha ayaa dib u soo kori kara adoo ku ridaya weel yar xididka gunta ku shubaya biyo. 1 ilaa 2 toddobaad gudahood, waa lagu beeran karaa dheriga ciidda leh si loogu beero madax cusub oo kaabash ah.
Karootada dusheeda waxaa lagu ridi karaa saxan biyo yar leh. Saxanka ku dheji daaqada daaqadeeda ama meel si fiican u shidan, iyo waxaad yeelan doontaa caleemaha ka soo bixi doona dabacasaha si aad ugu isticmaali karto dabacasaha
Dhig dhowr caleemo basil oo ka badan ama ka yar 3-4 sintimitir midkiiba koob biyo ah oo si toos ah u dhig iftiinka qoraxda. Markay xididdadu dherer yihiin 2 sintimitir, ku dhex beero dheryo waqti dheerna waxay noqon doontaa geed u gaar ah
Iska yaree salka celeryga iyo ku rid baaquli biyo diirran qorraxda. Marka laamaha iyo caleemaha ay bilaabaan inay ku soo baxaan bartamaha, ku dhex rida dheriga ciidda leh si ay si fiican ugu koraan
Salaati ama roodhida Romaine
Ku rid saladh romaine ah oo ku soo baxa weel XNUMX/XNUMX sentimitir biyo ah, si loo buuxiyo illaa nus sentimitir. Dhowr maalmood ka dib, xididdada iyo jirridaha cusub ayaa soo bixi doona oo lagu beeran karaa dhulka.
Jirida caleenta wuu kori doonaa markii lagu rido galaas biyo ah. Marka xididdada ay dherer ku filan yihiin, ku dhex beero dheriga qol si fiican u shidan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Beeraha deegaanka » 8 khudaar oo midba midka kale ka dib dib u soo kori kara
Kalluumeysiga badda-dheer, Faransiiska ayaa lagu eedeeyay been
Talooyin ku saabsan dharka oo la maydho iyada oo aan la nijaasayn